Lungela ukuyeka - ii-802Quits
Ikhaya » Iivenkile » Izizathu zokuyeka » Zilungiselele Ukuyeka
Ngaba uyazibuza ngeyona ndlela yokuyeka ukutshaya, i-e-cigarettes okanye enye icuba? Amathuba akho okuyeka angcono xa unesicwangciso sokuyeka ukuyeka. Eli candelo liza kukuhamba ngendlela yokungena kwindlela eya kwisicwangciso sokuyeka kunye nokuphumelela.
Ezinye izinto ezilula onokuzenza ngaphambi kwexesha- kwanangoku! -Ukunceda wandise amathuba okuphumelela kubandakanya:
Ukulahla izinto zecuba ekhayeni lakho, ezinje ngeetrayi, ilayita kunye neepakethi ezongezelelweyo zesigarethi okanye i-e-cigarettes, ukuhlafuna icuba, isinemfu okanye ukuhambisa izinto
Ukucoca ikhaya kunye nemoto ukuze ivumba lecuba lingakulingi xa uyekile
Sebenzisa iphetshana kwiveki ekhokelela kumhla wakho wokuyeka ukunciphisa ukurhoxa kwe-nicotine (funda ngakumbi nge Iimpawu ezisimahla ezivela kuma-802Quits)
Ukucela inkxaso kubantu osebenza nabo, abahlobo kunye namalungu osapho ukukunceda uphumelele
Ukufumana umhlobo oyekayo oza kukunika uxanduva kwinjongo yakho yokuyeka
Wonke umntu oyeka icuba uyakwenza oko isizathu. Abanye abantu, abafuni ukuziva belahliwe xa bonke abahlobo babo beyekile. Kwabanye, yeyempilo okanye yosapho okanye ngenxa ye Ukunyuka kwexabiso lecuba. Siyintoni isizathu sakho?
Bhala izizathu zakho zokuyeka icuba, i-e-cigarettes okanye ezinye iimveliso zecuba.
Cinga ezininzi kangangoko unako, ezinkulu okanye ezincinane
Beka uluhlu ngaphandle kweentsuku ezimbalwa
Emva koko, hamba uye ukhethe izizathu ezi-5 eziphezulu
Gcina uluhlu lwakho kunye nawe kwaye ubeke ikopi kwifriji okanye kumnyango wangaphambili. Xa umnqweno wokusebenzisa ukutshaya kwecuba, uluhlu lwakho lwezizathu zokuyeka luya kunceda umnqweno wakho udlule kwaye kukukhumbuze ngokukhetha kwakho okukhulu.